Orinasa mpanamboatra oligosaccharide China Agaro | HQG
Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide dia manana hetsika biolojika manokana, toy ny anti-oxidation, anti-inflammation, anti-virus ary ny fisorohana ny colitis, sns. Ny vokatra dia alaina ary novolavolain'ny teknolojia fanodinana siantifika, ny kalitao dia mifanaraka tanteraka amin'ny firenena ary ny fenitry ny EU. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide dia karazana oligose manana mari-pahaizana polymerization (DP) an'ny 2 ~ 12 aorian'ny hydrolysis, izay manana viscosity ambany, solubility avo, point de be hatsiaka ary asa be.
Amin'ny maha karazana polysaccharide an-dranomasina azy, ny agara ara-dalàna dia manana viscosity avo lenta ary mora solubility amin'ny rano, tsy mora entina, noho izany dia voafetra be amin'ny fampiharana. Saingy ny agaro-oligosaccharise amin'ny fahasimbana, manana ny fahalefahana tsara ao anaty rano izy, manampy ny vatan'olombelona hisitrika, tsy ny toetra mampiavaka ny oligosaccharides miasa ihany, ary koa ny fiasa ara-batana maro izay tsy azo soloina oligosaccharide mahazatra, toy ny anti anti mahery -cancer, anti-oxidation, hetsika anti-inflammatoire, fanoherana ny fahasimbana ary fahanterana ny starch mahatohitra, io dia iray amin'ireo mety ho fampandrosoana farany oligosaccharides.
1. Ny vokatry ny probiotika amin'ny tsinay
Fujian Global Ocean Agaro-oligosaccharides dia afaka manaparitaka bifidobacterium sy lactobacillus, mampihena be ny vanim-potoana fampiroboroboana bakteria mahasoa, mampiroborobo haingana ny vokatra mihombo. Izy io dia manana fanoherana ny fandevonan-kanina avy amin'ny anzima gastrointestinal ambony. Aorian'ny fitsaboana 24H ataon'ny anzima gastrointestinal ambony, saika ny oligosaccharides rehetra dia tsy tratry ny anzima amylolytic. Izy io dia tsy azo levonina na alain'ny vavonin'ny vavonin'ny mpampiantrano ary afaka mahatratra ny tsinay be.
2. Mamandoana sy mamotsy
Ny oligosaccharides an'ny Ranomasina Global Fujian dia naneho hygroscopicity tsara ary nisy vokany nanamontsina.
Miaraka amin'ny fahombiazany miavaka amin'ny fanakanana ny asan'ny monophenolase sy diphenolase of tyrosinase, dia afaka mampihena ny fiforonan'ny melanin ao amin'ny hoditra izy io ary manana fiasa mahasakana tsara. Noho izany, azo ampiana ho kosmetika izy io ho toy ny singa manadio.
3.Anti-fivontosana sy fanatsarana ny hery fiarovana
Izy io dia manakana ny famokarana sela homamiadana amin'ny alàlan'ny fanakanana ny asan'ny sela fivontosana toy ny homamiadan'ny vavony, ny homamiadan'ny atiny ary ny homamiadan'ny tatavia, ary amin'ny alàlan'ny fanakanana ny famokarana prostagladin PGE2 ary ny fitaomana ny tsiambaratelon'ny singa nekrosis fivontosana TNF-α, ka manakana ny famokarana sela homamiadana.
4. Vokatry ny bakteria
Amin'ny maha-preservative voajanahary tsara azy, dia misy fiantraikany mahery amin'ny bakteria izy io ary afaka mampihena ny famokarana zanatany bakteria manimba rehefa mahatratra 3,11% ny fifantohana. Izy io dia preservative iray izay ahitana agarobiose izay azo ampiasaina hitazomana ny sakafo sy ny zava-pisotro ho vaovao sy hisorohana ny fiovan'ny lokony, ny kolikoly ary ny fanapoizinana.
5. Vokatry ny anti-inflammatoire
Ny fanomanana am-bava dia afaka misoroka sy mitsabo aretin-tratra vanin-taolana tsy misy sitotoksidika. Izy io koa dia manakana ny famokarana NO (oksida nitrika be loatra miteraka aretin-tratra rheumatoid), izay azo ampiasaina hisorohana sy hitsaboana ireo aretina mamaivay maharitra toy ny aretin-tratra.
1. sehatry ny fitsaboana
Fanafody anticancer: nampiasaina ny hydrolisis enzymatika hahazoana ny oligosaccharide. Taorian'ny fanandramana totozy 15 andro dia hita fa ny tahan'ny fanakanana ny oligosaccharide 64mg / kg amin'ny sela homamiadana dia 48,7%.
Fanafody fiarovana ny atiny: ny molekiola agaro-oligosaccharide (ML) molekiola antonony dia afaka miaro ny asan'ny SOD sy GSH-PX, ary misy fiatraikany tsara amin'ny ratra amin'ny aty.
Fitsaboana aretim-panafody: ny Agaro-oligosaccharide dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fanakanana ny angiogenesis, izay tena ateraky ny fampiroboroboana ny apoptosis ny sela endothelial amin'ny lalan-drà sy ny fanakanana ny tsingerin'ny sela amin'ny dingana S.
Fanafody anti-inflammatoire: fisorohana sy fitsaboana aretina mitaiza mamaivay toy ny vanin-taolana rheumatoid.
2. Sakafo ara-pahasalamana
Vokatra vita amin'ny ronono: ny agaro-oligosaccharide dia tsy levon'ny vavonin'ny gastrointestinal mpampiantrano, fa kosa afaka manentana ny fitomboan'ny bifidobacterium sy lactobacillus bakteria roa mahasoa ao amin'ny tsinay, ary manakana ny fitomboan'ny bakteria manimba toy ny enterococcus, amin'izay manatsara fahasalaman'ny mpampiantrano. Karazana prebiotika vaovao izy io. Ny fitomboan'ny fampiroboroboana ny agar-oligosaccharides amin'ny probiotics dia tsara kokoa noho ny pectin-oligosaccharides.
Fitehirizana sakafo: Preservatives
Agar-oligosaccharide dia karazana fitehirizana voajanahary, izay afaka mitazona ny sakafo sy ny zava-pisotro ho vaovao sy hisorohana tsara ny fiovan'ny lokony, ny kolikoly ary ny fitrandrahana oksidana. Agence famenoana: Agar-oligosaccharides dia azo ampiasaina ho mpanenona sy mpanaparitaka izay mamy be satria tsy simba ny bakteria tsinay ary manana ny mampiavaka azy ireo oligosaccharides hafa.
3. Fahanana miasa
Ny vola nampidirina dia 0,05% ~ 10% amin'ny lanjan'ny sakafo. Raha ny fitsapana ny kolontsaina dia nihatsara ny tsimatimanota, ny fanoherana ny aretina, ny taham-pitomboana ary ny taham-pahaveloman'ny trondro toy ny tilapia, ny makamba toy ny patsa fotsy any Amerika atsimo, ny trondro ary ny foza raha oharina amin'ny vondrona mifehy. Agaro-oligosaccharide dia additive feed voajanahary tsara.
4. Ireo kosmetika
Izy io dia avy amin'ny ahidrano voajanahary madio, izay tsy misy poizina ary azo antoka ampiasaina. Izy io dia mety raha atambatra amin'ny akora hafa ho toy ny additive cosmetic vaovao. Ambonin'izany, ny oligosaccharide dia siramamy tsy miandany, tsy misy vondron'habokrazy marobe ao amin'ireo vatan-drafitra misy azy, ary azo ampifangaroina amina mololoola rano maro be hamorona fehy hidrôzenina. Noho izany, ny oligosaccharide dia manana hygroscopicity tsara. Amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fihenan'ny oxidation an'ny tyrosinase, mampihena ny fiforonan'ny melanin ao amin'ny hoditra ary manafotsy ny hoditra.
Ny tanjaky ny gel
(G / cm²)
Degre ny polymerization
Mandrosoa ny maripana
Fanamarihana: ny masontsivana viscosity dia vahaolana 1,5% ambanin'ny 100 ℃.
Previous: Agar Soluble eo noho eo
Manaraka: Semi nanadio Carrageenan